Maamulka Juaba oo u gurmaday dad Alshabaab kula dagaalamay banaanka Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Juaba oo u gurmaday dad Alshabaab kula dagaalamay banaanka Kismaayo
17th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Dagaal culus ayaa saaka wuxuu ka qarxay duleedka Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose kaasi oo udhaxeeyay Ciidamada Maamulka KMG ee Jubba iyo kuwa Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada Jubba ay gaareen saaka deegaan duleedka Kismaayo ku yaalo oo Shabaab ay dadka deegaanka ka qabsadeen.
Maamulka KMG ee Jubba, ayaa waxa ay faah-faahin ka bixiyeen Dagaal saacado qaatay oo saaka ka qarxay deegaanka Cabdile Biroole oo Magaalada Kismaayo dhanka bari kaga beegan 45-KM, halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada Maamulka Jubba iyo kuwa Al-Shabaab.
Sarkaal u hadlay Ciidamada Maamulka Jubba ayaa waxa uu guulo ka sheegtay dagaalkaasi, waxaana uu tilmaamay in ciidamooda ay ku sugan yihiin deegaankii lagu dagaalamay oo ay kala wareegeen Al-Shabaab.
Ismaaciil Kheyre Dhuxuloow oo kamid ah saraakiisha ayaa sheegay in dagaalkaasi ay kaga dileen Al-Shabaab 4- ruux, halka dhankooda uu qirtay inay kaga dhaawacmeen dagaalka saddex Askari, balse ma uusan sheegin dhimasho Askartooda soo gaartay.
Xaalada deegaanka lagu dagaalamay ee Cabdile Biroole oo Magaalada Kismaayo dhanka bari kaga beegan 45-KM ayaa hada degan, wuxuuna sheegay in ciidamada Jubba inay howlgalo ka wadaan duleedka deegaankaasi oo ay suuragal tahay buu yiri inay Al-Shabaab soo weeraraan markale.
Deegaankaan, ayaa shalay iyo Doraad waxaa ku dagaalamay Dadka deegaanka iyo ciidamada Al-Shabaab, markii Al-Shabaab dadka deegaanka ay weydiisteen inay bixiyaan dhaqaalo, taasina ay ka biyo diideen dadka deegaanka.
Muqdisho: Sarkaal milateri ah oo qarax lagu dilay
Defeat of Somalia’s Shebab ‘matter of time’: ex-envoy